I-Boho Casita - Indawo Yokungena & Indawo Yokubhukuda! Imizuzu engu-8 kuya ku- ✈️ - I-Airbnb
I-Boho Casita - Indawo Yokungena & Indawo Yokubhukuda! Imizuzu engu-8 kuya ku- ✈️
Gilbert, Arizona, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Asheli And Cam
U-Asheli And Cam Ungumbungazi ovelele
Indaba yokuqala yesivakashi sangasese e-Gilbert. Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela egcekeni eliseceleni, i-Boho Guest Suite inikeza indawo yokuhlala ethokomele kodwa enethezekile. Ngamasevisi 'afana nehhotela' kanye nomuzwa wekhaya elithokomele ungaba nakho konke lapha kulo mphakathi osanda kwakhiwa. Jabulela ukuhamba epaki lomphakathi noma ama-greenbelts amakhulu azungeze umphakathi. Ngena echibini elihle lomphakathi noma uphumule ngemva komsebenzi wosuku olude ku-jacuzzi efudunyeziwe. Inani, ukusebenza kahle, nobuhle balo kuhle kakhulu!
Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela ingafinyelelwa esangweni eliseceleni/igceke. Abaqashi ekhaya eliyinhloko bavame ukusebenzisa isango elifanayo ukungena ekhaya futhi ngezinye izikhathi ungabazwa bengena. Babelana ngendawo ye-patio, kodwa abakwazi ukungena ku- casita.
I-HDTV engu-65" ene- I-Roku, I-Netflix
4.86 · 132 okushiwo abanye
Indawo ezungeze idolobha elikhulu umphakathi omusha onobungane wokwakha enkabeni yeningizimu-mpumalanga ye-Gilbert. Yimizuzu engu-8 yokushayela ukuya esikhumulweni sezindiza sase-Mesa Gateway nemizuzu engu-5 yokushayela ukuya esikhungweni se-ASU empumalanga. Imizuzu engu-7 yokuthenga e-San Tan Village Mall kanye nokuzijabulisa e-Main Event, i-TopGolf, nokudla okumnandi e-Joe 's Farm Grill, i-Taco yangemuva, neSitolo Sekhofi ukusho okumbalwa
Ibungazwe ngu-Asheli And Cam
UAsheli And Cam Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Gilbert namaphethelo